Taleefanka casriga ah ee iPhone oo gacan wayn ka geystay hooyo dhalmada ku dhibtooneysa! | Radio Iftin
Taleefanka casriga ah ee iPhone oo gacan wayn ka geystay hooyo dhalmada ku dhibtooneysa!
(Thursday, March 19, 2015)- Waxaan marna la is-waydiinayn faa’iidada ay teknoolojiyada casriga ah u leedahay nolosha iyadoo ay dhawaan dhacday in taleefanka iPhone uu gacan wayn ka geystay hooyo dhalmada ku dhibtooneysa.
Arrinkan ayaa waxa ay qabsatay hooyo lagu magacaabo Rivera oo ka timid Newark, New Jersey, markii ay u soo xaadirtay balanta caadiga ah ee baarista caafimaad lagu marsiiyo uursidka amaba qofka xaamilada ah.
Laakiiin markii uu dhakhtardu ku xannibantay Isbital, waxaa biyo ooda soo jabsaday Rivera, taasoo keentay in masuuliyadii oo dhan ay dusha ka fuusho caawiye caafimaad taasi oo waligeed aan horey wax u dhalin.
“Madixiisa wuxuu ka laalaaday halkaa”. Ayay ku warantay Rivera oo intaa ku dartay: “Diyaar ayuu ahaa mana la joojin karin”.
Balse argagax kuma ay abuurin midaa ninkii qabay gabadaha xaamilada ah oo wuxuu durba la yimid fikrada ah in taleefankiisa iPhone uu wicitaan muuqaal ah ka woco dhakhtaradooda Meena Devalla si ay caawiyaha u siisiyo tilmaamo cad.
Waxayna dhakhtaradii awooday inay tilmaamo rasmi ah siiso caawiyayaasha caafimaad iyadoo isticmaaleysa wicitaanka muuqaalka taleefanka.
Wax yar un kaddib, 20-daqiiqo oo shaqo ah kaddib waxaa dhashay wiilkeeda Raphael.
“Waan yare wal-walsanaa”. Ayay tiri Oswaida Torres oo ka mid ahayd caawiyayaasha caafimaad, waxayna intaa raacisay: “
“Waxaa mahada leh ilaahey, taasoo ay shaqeeyeen wax kasta, hooyada iyo canugana way fiican yihiin”.